Tune up utilities 2011 + Serial Keys နှင့်အသုံးပြုပုံ | နေမင်း ( နည်းပညာ )
Tune up utilities 2011 + Serial Keys နှင့်အသုံးပြုပုံ
March 15, 2011 — naymin99
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Tune up utilities 2011 ကို Serial Keys လေးတွေနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Tune Up ဆိုတာ
ကတော့ ကျွန်တော့တို့ကွန်ပျူတာ၇ဲ့ Windows Operation System ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးတော့ ကောင်းမွန်လာအောင်
ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Untilities လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို သွတ်သွတ်လေးသုံးချင်သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေ
တာပေါ့ဗျာ………..ဒီကောင်လေး၇ဲ့အသုံးဝင်ပုံအသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုဖြိုးငြိမ်းေ၇းသားထားတာလေးကိုပြန်၇ှယ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မူ၇င်းလင့်လေးကတော့ ဒီမှာ ပါ။အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်
အောက်မှာ ဒေါင်းလော့လင့်လေးပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော် Serial Keys ထည့်နည်းကိုတော့အောက်မှာပုံ
၁။ Tuneup ကို Run ပြီးတာ နဲ့ အလွယ်တစ်ကူ အသုံးပြု လို့ ရအောင် ပေးထားတဲ့ module လေးပါ လူတိုင်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ ၊ systems ကို cleans လုပ်ပေးခြင်း၊စီရီပေးခြင်း( defragements) တို့လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။ defragement လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကတော့ 08 မှစတင်ပါရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ် … ။
ဒီ Editor လေးက တော့ registry ကို ပြောင်းလဲ တာတွေEnable, disblae လုပ်တာတွေ ကို ကူညီပါလိမ်မယ် Run commandကနေ regedit လို့ ခေါ်ပြီး သုံးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ … ။
ဒီ tool လေးကလဲ တော်တော်အ သုံးဝင်ပါတယ်Software တစ်ခုကို uninstall လုပ်လို့မရ C ထဲမှာ သွားဖျက်လို့ လဲ မရ ဖြစ်နေတဲ့ အခါမျိုးတွေ မှာအလွယ်တစ်ကူ ဖျက်နိုင် ပါတယ် Kesper တင်ပြီးပြန် ဖြုတ်လို့ မရ ၊ ဖျက်လို့မရ ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ . ဒါလေးကိုသာ အသုံးပြု ကြည့်လိုက်ပါ အိုကေ စိုပြေသွားမှာပါသတိပြုစေ လိုတာကတော့ ဒါနဲ့ ဖျက်ထားတာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ ပြန်ခေါ်လို့ မရပါဘူးဗျာ …။
Serial Keys ထည့်နည်း
အ၇င်ဆုံး Help & Support ထဲတွင် About ဆိုတာကို၇ှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။အပေါ်ကပုံမှာပြထားသလိုမျိုး
အခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ပထမဦးစွာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Serials file ထဲမှမိမိတို့
ကြိုက်နှစ်သက်၇ာကီးတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါ။ပြီး၇င် Help & Support ထဲမှ Register Product ကို၇ှာပြီးနှိပ်
လိုက်ပါ။ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြထားသလိုမျိုး Full name နှင့် Organization တိုတွင်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်
၇ာအမည်ကိုထည့်လိုက်ပါ။ Product Keys နေ၇ာတွင်တော့ ကျွန်တော်တို့ယူလာတဲ့ ကီးကိုထည့်လိုက်
ပါပြီး၇င်ပုံမှာပြထားသလိုဆက်ပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါဆို၇င်တော့ Serial Key ထည့်လို့ပြီးသွားပါပြီ။
Posted in Tune - Up Untilitiles. LeaveaComment »
« Internet Download Manager 6.05 build5final + Path
G-talk ကို စားလုံးပုံစံတမျိုးလေးနဲ့ေ၇းချင်သူများအတွက် »